DAAWO: Kabtankii Ruushka Ee Shirokov Oo Dhulka Ugu Tuuray Garsoore Casaan Siiyey Isniintii - Gool24.Net
DAAWO: Kabtankii Ruushka Ee Shirokov Oo Dhulka Ugu Tuuray Garsoore Casaan Siiyey Isniintii
Kabtankii hore ee xulka qaranka Ruushka, Roman SHiokov ayaa feedh dhulka ugu tuuray garsoore casaan siiyey, kaddibna wajiga ka laaday, xilli ay socotay ciyaar dhacday Isniintii.
Shirvok oo waddankiisa Ruushka u saftay 57 ciyaarood, da’diisuna tahay 39 jir ayaa weerar toos ah kusoo qaaday garsoore Nikita Damchenko isaga oo ku qaylina ‘Car casaan isii, waan ku garaaci doonaa”, waxaanu markii uu arkay kaadhka cas oo la taagay uu wajiga kaga dhuftay feedh miisaaman oo sababay in Nikita uu dhulka ku dhaco, waxaanu markaas kaddib la dul istaagay laag uu isagana wajiga kaga dhuftay, ka hor intii aanay ciyaartoyda labada kooxood ka qaban.
Roman Shirokov oo hore ugu ciyaari jiray kooxaha CSKA Moscow iyo Zenit, waxa uu isha agteeda ka gaadhsiiyey dhaawacyo garsooraha uu gacanta ula tegay, waxaana garoonka laga saaray garsoore Nikita Danchenko oo dhaawacyo waaweyn qaba, wajigana dhiiggu ka da’ayo.
Roman Shirokov ayaa raalligelin ka bixiyey ficilka foolxumada ah ee uu sameeyey, laakiin waxa la filayaa in laga dacweeyo booliska oo lagu qaado fal-dambiyeed ka baxsan ciyaaraha.
Artur Perosyan oo ah khabiir dhinaca ciyaaraha Ruushka ah ayaa sheegay in garsooraha dhaawacyadu gaadheen uu qorshaynayo inuu tago booliska, taas oo keeni karta in gebi ahaanba ay soo afjarto waayihii ciyaareed ee Shirokov.
Artur Perosyan waxa kale oo uu tilmaamay in raalligelinta uu la raagay Shirokov, isla markaana lagu qaadi doono qodobbada sharci ee dadka sida badheedhka ah waxyeellada ugu geysta dadka kale iyagoo ogsoon sharciga oo waliba khabiirro ku ah, sida Roman Shirokov oo kale oo muddo dheer ciyaaraha kusoo jiray.
Garsoore Nikita Danchenko ayaa isaguna baraha bulshada ku baahiyey in qodobbo la tolay, laakiin uu caafimaadkiisu fiican yahay.
“Waxaan cusbitaalka ku jiray afar saacadood iyo badh, kuwaas oo 15 illaa 20 daqiiqadood oo ka mid ah ay qaybta gargaarka degdegga ah joogay. Waxay igu sameeyeen talliin meel walba, waxaanay baadhayeen inta ay le’ekayd jugtu.” Ayuu Nikita Danchenko yidhi.
Halkan ka daawo sidii wax u dhaceen: